I-Amadumbe noma "amazambane asezindaweni ezishisayo" (iColocasia esculenta) nayo iyaziwa ngokuthi mufhongwe, madumbis, taro noma dasheen. U-Amadumbe usekhulile eSouth-East Asia iminyaka engaphezu kwengu-6 000 futhi waziswa eNingizimu Afrika ngabathengisi basePutukezi kuma-1500 kanye nabasebenzi baseNdiya abaqhamuka kamuva.
Kuyinto yokutshala izimpande ezishisayo ezitshalwe ezitshalweni zaseNingizimu Afrika kanti ingenye yezitshalo zokudla zemifino ezibaluleke kakhulu emhlabeni wonke. I-Tannia (i-Xanthosoma sagittifolium) noma izindlebe zezindlovu yisinye isitshalo esibalulekile sezimpande, esakhula kakhulu emazweni aseNtshonalanga Afrika futhi sithandwa ngaphezu kwamadumbe ngenxa yezivuno eziphakeme.
Noma kunjalo, ukukhiqizwa kwezezimali kwezwe okungu-90% kuvela emazweni aseNtshonalanga Afrika njengeCameroon, Nigeria kanye neGhana. ENingizimu Afrika, i-amadumbe yayikhiqizwa kakhulu ngabalimi bezokudla KwaZulu-Natali, eMpumalanga, eNtshonalanga naseMpumalanga Kapa, ​​kodwa ngokusungulwa kwama-dumbe ngamakethe okudla okudumile kuye kwandisa isimo salesi sitshalo semifino kanye nesitshalo ukudla.
Indlela Yokukhulisa Amadumbe
uAmadumbe ungumcibisholo we-tubular oqoshiwe ophezulu obizwa nangokuthi 'mammy'. Unesikhumba esinosundu futhi sinesisindo kusuka ku-500 kuya ku-900 g, kodwa singakhula sinzima njengo-3.6 kg. Inyama imhlophe noma i-pink. I-Amadumbe ikhetha umthunzi omncane, kepha ingatshalwa ilanga eligcwele uma liphuziswa.
Kudinga isimo sezulu esifudumele futhi asikwazi ukubekezelela ukukhanda. U-Amadumbe ukhula enhlabathini encane ene-acidic, enomanzi enezinto eziningi eziphilayo noma umquba. Kungenziwa ukusakazwa kusuka nezilimo eziyizigaxa ezigcwele noma ama-cuttings avela ezilimo eziyizigaxa.
Tshala ngesandla ngesandla sokwehla phansi bese uhlelwa kancane, cishe u-15 cm ojulile. Isitshalo sidonsa u-60 cm ngaphandle kwe-1 m isikhala phakathi kwemigqa. Isikhathi esihle kakhulu sokutshala nguDisemba kuya ku-Ephreli nanoma nini lapho inhlabathi inomanzi. Geza nge-NPK (15:15:1).
Lokhu kubonisa ukuthi inani le-nitrogen (N:15 amayunithi) kuya ku-phosphorus (P:15 amayunithi) kuya ku-potassium (K: iyunithi eyodwa). Fafaza amabhodlela we-coke we-coke we-5 kuya ku-6 esendandeni mayelana no-10 cm ezungeze isitshalo. Amadumbe ithandwa yizinambuzane ezifana nezintuthwane ezimhlophe kanye namagundane futhi zijwayele ukubola empande lapho zitshalwe enhlabathini engenawo amanzi. Kodwa-ke, ukuphikisana nomvukuzane othanda izitshalo ezifana namazambane noma izaqathe.
Lokhu kungenxa yokuthi i-amadumbe iyingozi kakhulu lapho idliwe eluhlaza, ngenxa yezinga eliphakeme lamakhekhedi e-calcium oxalate, okubangela ukuvuvukala komlomo nomphimbo. Ukuvuna kwenziwa emva kwezinyanga eziyisishiyagalombili kuya kweziyishumi, lapho amaqabunga ephuzi.
Izimpande zenziwe ngepane noma ngogandaganda enepuleti ekhethekile. Izimpande zihlanzwa, zihlungwa futhi zipakishwe. Ucwaningo olwenziwa nguPrudence Ntombifikile Tembe olwenziwa ezindaweni zasemaphandleni KwaZulu-Natal ngonyaka ka-2008 lwabonisa ukuthi abathengisi bakhetha ukuhlinzekwa ngezidakamizwa ezincane eziphakathi, okuhlanjululwayo nokomisiwe, okukhishwa emakreyini.
Inselelo enkulu kulabo abakhiqizi basezindaweni zasemakhaya beyithutha izidakamizwa ezimakethe.
Amadumbe ine-flavour ecebile yomhlaba, iphezulu kuma-carbohydrate (i-GI ephansi) futhi inamaprotheni amaningi nama-amino acids kunezinye izilimo zezitshalo. Unamaphrotheni angu-9% kuqhathaniswa namazambane 1.9% namazambane 1.7%. Icebile fiber, magnesium, potassium, insimbi, i-vithamini A, i-vitamin B1, i-vitamin B2, ne-vitamin C.
Iphekwe njengamazambane noma amazambane futhi angabiliswa, agwetshwe noma agwetshwe futhi akhonze njengama-mash, ama-chips noma emasimini.Amadumbe agayiwe afaneleka njengokudla okuluthisayo. Amaqabunga, futhi ngezinye izikhathi iziqu, adliwa njenge sipinashi futhi anikeze ummbila kummbila noma aphekwe ngekakhukhunathi futhi akhonze nge-dumbe.
Umphakathi waseNdiya KwaZulu-Natali uhlanganise i-amadumbe ekudleni kwawo njenge 'puri cleans'. Amaqabunga asakazwa nge-batter esicwebekile, agxilwe, agwetshiwe bese ehlulwa futhi akhonze ngamaphakheki. Izimbali ze-Amadumbe (ebizwa nangokuthi 'aroids') zihunyushwa zibe ufulawa ukuze zilungiselele 'fufu', ezithandwayo ngesitshalo eNigeria.
Ngokwesiko i-Amadumbe ikhule njengento yokudla okuyisisekelo, kodwa eminyakeni embalwa edlule, isetshenziselwe ezinye imikhiqizo yokudla. Lokhu kufaka phakathi i-amadumbe nesisekelo se-pizzach pizza, i-crisps, i-curry nama-flakes ama-dumbe.